Musangano weKimberley Process Unopinda Muzuva Retatu muAmerica
Musangano wepakati pegore wesangano rinoona nezvekucherwa nekutengeswa kwemangoda nenzira kwayo pasi rose wapinda muzuva retatu nyaya yeZimbabwe ichitemesa musoro sangano reKimberley Process, kana kuti KP, sezvo pachine kunetsana pakati penyika dzemuAfrica, dzichitsigirana neAsia, kwotiwo America, Canada nedzimwe nyika dzekumawirira, dzichiitawo chirwira ingwe panyaya iyi.
Sachigaro weKP, Amai Gillian Milovanovic veUnited States, ndivo vari kukokera musangano uyu muWashington DC.
Nyika nemasangano ari muKP dzaswera dzichizeya nyaya yevemakambani madiki anochera mangoda kuti kodzero dzavo dzingachengetedzwe seyi. Imwe nyaya iri kutsviriridza kumusangano uyu ndeye zvinoreva mangoda eropa. Zimbabwe inoti mangoda airi kuchera nekutengeswa, haasi kushandiswa munyaya dzehondo, nokudaro mangoda aya haasi eropa.
Nyika dzekumawirira dziri kukurudzirawo kuti Zimbabwe, iyo ine vanhu vanodarika makumi maviri kumusangano uyu, inyatsojekesa mashandiro ekambani yeAnjin, iyo inova yemubatanidzwa pakati pehurumende nekambani yekuChina.
Nyika idzi dziri kutiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwaMarange, uye mashandiro emakambani ari kuchera mangoda, zvinofanirwa kujekeswa. Mashoko aya akabuda mumisangano iri kuitwa pasi pemadingindira akasiyana siyana.
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, mwedzi wapera vakataurawo kuti kambani yeAnjin haisi kuunza mari kuhomwe yenyika. Vakatiwo havazivi kuti ndivanani vari mubhodhi rekambani ye Anjin.
Asi gurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, vanoti vari kufara nemafambiro emusangano weKP kusvika pari zvino.
Mukuru weCentre for Research and Development, VaFarai Maguwu, mumwe wemasangano akazvmirira ari kupinda musangano uyu vanoti vari kukurudzira kuti Zimbabwe ijekese mashandisiro ayo mari inobva kumangoda ari kucherwa kwaMarange.
Musangano weKP uri kutarisirwa kupera neChina mushure mekuvhurwa kwavo neMuvhuro.